နောက်ဆုံးခရီးတစ်ခုတွင်………..၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » နောက်ဆုံးခရီးတစ်ခုတွင်………..၁
Posted by naywoon ni on Dec 30, 2011 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 10 comments
ဒီစာစုကို ရေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်အနောက်မှာ ကပ်ပါနေတဲ့ အရိပ်တစ်ခုကို သတိမထားမိပဲ တစ်စုံတစ်ရာကို တစ်ချိန်ချိန်မှာ လက်လွတ်စပယ် လုပ်တတ်လေ့ရှိတဲ့ လူသားအားလုံး သတိတရားလေးကပ်မိနေကြဖို့နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားဆိုတာလေးကို သတိရစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ရေးလိုက်တာပါ……။
ဖြစ်တဲ့နေ့က ဒီလို ………
20-12-2011 နေ၀န်းနီတို့ အိမ်ကရေမိုးချိုးပြီးအိမ်ကအထွက် ထိုင်နေကျ ဗစ်တာစိုးမိုးရဲ့ စာအုပ်အငှားဆိုင်လေးမှာဝင်ထိုင်ရင်း…. အွန်လိုင်းအကြောင်း ကောင်မလေးတွေ အကြောင်း ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း ထွေရာလေးပါးပြောနေရင်း…….. မြို့တောင်ဘက်အ၀င်ဘက်မှာ ဆိုင်ကယ်တိုက်တယ်ဆိုပြီး သွားကြည့်ကြသံကြားပါတယ်…။ အနားကလူတွေက လိုက်ဦးမလားလို့ခေါ်တာတောင်မှ
“ မင်းတို့ကလည်း နေ့တိုင်းတစ်နေရာမဟုတ်တစ်နေရာမှာ ဆိုင်ကယ်တိုက်နေတာ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး”
ဆိုပြီး ပြောလိုက်သေး…။ ထိုင်နေရာကတောင်မရွေ့…။ ကြားရသေးတယ်…..။
“ သေသွားတဲ့သူက အရက်နံ့ကိုထောင်းနေတာပဲ”
အချိန်က ညနေ သုံးနာရီခွဲ လောက်ပဲရှိသေးတယ်….။ အဲဒါကြောင့်
“ ဒီအချိန်မှာတောင် ဒီလောက်မူးနေတာဖြစ်မှာပေါ့…………။”
ပြောလိုက်မိသေးတယ်…။ ကိုယ်ရည်သွေးတာမဟုတ်…။ နေ၀န်းနီတို့ အမျိုးထဲမှာက မအိုဆေးသောက်သုံးရင်း အိုအောင်နေမသွားကြသူတွေများတယ်….။ ခုစစ်စစ် ပေါက်ပေါက် ပြန်ကြည့်ရင် အခုဖြစ်တဲ့ဦးလေး တစ်ယောက်ရယ်…. နေ၀န်းနီတို့ ညီအကိုဝမ်းခွဲလေးယောက်ရယ် ဒါပဲ ရှိတာ …..။ တစ်ယောက်မှ လွန်အောင်မသောက်………။ နေ၀န်းနီက မသောက်တာကြာပေါ့……….။ ညီဝမ်းကွဲတစ်ယောက်က အဝေးမှာ…….။ ဒီတော့ ဒီကိစ္စတွေ ကိုယ့်လူလေလား သိပ်မပူပန်မိ….။ အရင်းအချာထဲမှာ နေ၀န်းနီလောက်ပဲ မူးပြဲနေအောင်သောက်တတ်တာ …။ ခုနေ၀န်းနီ ကိုယ်၌ ကမသောက်လေတော့ ……….
“ ဟင်…… ခင်ဗျား မသိသေးဘူးလား …။ ခုဖြစ်တာ သမဦးစီးက ဦးခင်မောင်လတ်လေ…။ ခင်ဗျားနဲ့ အမျိုးတော်သေးတယ်မဟုတ်လား”
အဲဒိလို စက်ဘီးပြင်တဲ့ “စောခိုင်” ပြောလိုက်တော့မှ နေ၀န်းနီလည်း မျက်လုံးပြူးပြီး စက်ဘီးအစုတ်လေးဆွဲလို့ သူတို့နေအိမ်ဘက် ထထွက်လာခဲ့မိတယ်….။ ဟုတ်တယ်လေ…. ဒီအချိန် အဲဒိအိမ်မှာ အဒေါ်တစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့မှာ…။ သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်ရှိတာက သားအကြီးက ရန်ကုန်က အကြီးစားဝပ်ရှော့ တစ်ခုမှာ…။ သမီးက နေပြည်တော် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှာ……။
တဲ့……..။ ခုမှ ကိုယ့်ပြန်ထိနေတာ….။ သူက (သေဆုံးသူ) အရက်မသောက်မဟုတ်…။ သောက်ပါတယ်…။ သုံးလေးပက်ထက် ပိုသောက်နိုင်သူမဟုတ်…။ အရင်က ဘီယာတစ်ခွက်ကိုတောင် ရေရောသောက်တဲ့သူ……။
ရောက်သွားတော့ ထင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ….။ အဒေါ်တစ်ယောက်ထဲ…။ တစ်ဘက်ဆွေမျိုးများက ဘာမှ မဖြစ်သယောင် လှိမ့်ပတ်ပြောဆိုနေကြတယ်…။ ဟုတ်တယ်လေ ..။ချက်ချင်းပြောပစ်လိုက်လို့ကလည်းမဖြစ်သေး…။ သူမှာက သွေးတိုးကော နှလုံးကော နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာကော….။ ဒဏ်ခံနိုင်မှာမဟုတ်…။ သူ့သားသမီးတွေဆီ ဖုန်းဆက်ပြီးပြီလားဆိုတော့
ဆိုလို့ ဆိုင်ကယ်တိုက်တဲ့နေရာကို တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်မိတယ်…။ အလောင်းကတော့ မရှိတော့ဘူး။ ဆေးရုံသယ်သွားရှာပြီ…။ ဒူးကာ အကြေအမွများ လက်ကိုင်တစ်ဘက်ပြုတ်ထွက်နေတာ တွေ့လိုက်ရသေးတယ်…။ မှန်ကွဲများ ပြောင်အောင်မရှင်းလင်းနိုင်သေး…။ ဒါနဲ့ အနားက ကွမ်းယာဆိုင် ကိုသွားပြီးစပ်စုကြည့်တော့………..
“ သူတို့ ရုံးအဖွဲ့လို့ ပြောတယ် ဆိုင်ကယ်သုံးစီး လာတာ…….။ တိုက်မိတဲ့ ကောင်လေးတွေက အနောက်ဘက်ငနေတက်လာတာ …။ ကျောင်းသားလေးတွေပဲ…။ ဒါပေမဲ့ တိုက်ပြီးတော့ သူ့ရုံးကလူတွေ တစ်ယောက်မှ မရှိတော့ဘူး…။ လမ်းပေါ်မှာ ဒီအတိုင်း ကျကျန်နေခဲ့တာ….။ ဦးထုပ် က ဆောင်းမထားဘူးလေ…။ ရှေ့က ခြင်းထဲမှာ ဒီအတိုင်း ကတ္တရာလမ်းနဲ့ ဥုပ်စက် ရိုက်ပစ်လိုက်တာ… ကျန်တဲ့ ဘယ်နေရာမှ ခိုက်မိပုံမပေါ်ဘူး…။ နောက်က ကားတစ်စီးရပ်ပြီး လမ်းဘေးရွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ အနားက ဆိုက္ကားသမားတွေက ၀ိုင်းရွေ့ပေးလိုက်ကြတာ…။ မိနစ်လေးဆယ်လောက်ကြာမှ အလောင်းလာကောက်သွားတာ ခု ဆေးရုံမှာ ”
ဒါက ကွမ်းဆိုင်က ကောင်မလေးရဲ့စကား….။ အဲဒါနဲ့ အပြန် စခမ်း ၀င်…။ ကိုယ်နဲ့ သိတဲ့သူ အကျိုးအကြောင်းမေးတော့
“ လူသေမှု ဆိုတော့ တရားရုံးတော့ တင်ရမှာ အဲဒိတရားခွင်ပြီးမှ ဆိုင်ကယ်ပြန်ယူလို့ရမှာ…။”
အဲဒါနဲ့ အိမ်တစ်ခေါက်ပြန်….။ နေ၀န်းနီအမေ ပဲ အနားမှာရှိ …။ ကြားထဲက အမ တစ်ယောက်က တောင်ပေါ်ဈေးရောင်းသွားနေတာ လှမ်းခေါ်ထားရတုန်း…။ ကုလား လို့ ခေါ်တဲ့ ညီဝမ်းကွဲတစ်ယောက် ကဆေးရုံလိုက်သွားတယ်…။ သူကဆိုင်ကယ်နဲ့ ဆိုတော့ သေချာစီးဖို့ မှာရသေးတယ်…။ အဒေါ်က သူ့ညာနေမှန်းသိပုံရတယ်…။ လုံးဝမယုံဘူး…။ အဲဒိအချိန်မှာပဲ… အဲဒိတော့ ညာနေတဲ့သူတွေကလည်း တစ်ခွန်းပြောအပြင်ထွက် …။ စိတ်သာတင်းထားပုံရတာ လူကမျော့ နေပြီ….။ ခဏနေတော့ ကုမ္ပဏီ မှာလုပ်နေတဲ့ သမီးလာတယ်…။ သူကသိပြီးနေပြီ…..။ ကုမ္ပဏီ က ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးတာဆိုတော့ သူ့အဖေကိုကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ လိုက်ပို့တဲ့ကားနဲ့ပဲ ဆေးရုံဆက်သွားခိုင်းလိုက်ရတယ်….။ အမေနဲ့ တော့ တွေ့မပေးတော့…..။ ညာထားတာ အညာပေါ်သွားတာထက် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်သွားရင် ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ပေးမတွေ့ပဲ ထားလိုက်ကြတာပါ….။
ဒီလိုနဲ့ ညီမငယ်ဆေးရုံသွားနေတုန်း သူ့ ကုမ္ပဏီ က ကားတစ်စီး ထပ်ရောက်လာပါတယ်…။ နေရာတင်သေဆုံးသွားတယ်လို့ သိရလို့ သူမအင်ချပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီး လိုအပ်တာပြင်ဆင်ပေးဖို့ပါတဲ့….။ ဒါနဲ့ နောက်က ထပ်လိုက်လာတဲ့သူတွေ နေထိုင်နားနေဖို့ အဒေါ်တစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်မှာပဲ စီစဉ်ပေး …..။ အားလုံးက မျက်နှာမကောင်းကြ ….။ ဘာမှလည်း ကျွေးလို့မရ….။ အိမ်နီးချင်းများက လူနာ ကို ဆေးခန်းက ဆရာဝန်ပင့်ပြီး လိုအပ်တဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့ စီစဉ်……။ ဒီတစ်တော့ ဖွင့်မပြောပဲနဲ့ အားရှိအောင်အိပ်ပျော်သွားပါစေဆိုပြီး အိပ်ဆေး ပေးဖို့ လုပ်နေကြလေရဲ့….။ သူတို့ကောင်းရာစီစဉ်ကြတာပဲလေ…။ ဘာမှမပြောသာခဲ့….။ ဆွေမျိုးအရင်းအချာဆိုလို့ နေ၀န်းနီတို့ သားအမိနဲ့ သမီးတစ်ယောက်နဲ့ တူတစ်ယောက်ပဲရှိသေးတာ…..။ သားအကြီးက ရန်ကုန်မှာနေတာ ဖုန်းဆက်ခေါ်ထားတုန်း…။ မနက်မှရောက်မယ်…။ သူ့သားရောက်လာကာမှ ဖွင့်ပြောပြီး လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်ကြဖို့ အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…။
ခုဖြစ်တဲ့ အဒေါ်နဲ့ တောင်ပေါ် ဈေးတက်ရောင်းတဲ့ အဒေါ်က အရှေ့ဘက် အနောက်ဖက် နှစ်လမ်းလောက်ဝေးတာပါ…။ နေ၀န်းနီတို့က မြို့တောင်ဘက်စ မှာသီးသန့်ကွဲနေတာ….။ ရှိတာကလည်း အဲ ကျန်တာကလည်း ဒီညီအမ သုံးယောက်ရယ်…။ မောင်နှစ်ယောက်က စောစောစီးစီး သွားနှင့်ပြီလေ…။ မအိုဆေးသောက်ပြီး အိုအောင်နေမသွားကြတော့…။
“ သေခြင်း သေခြင်း သေခြင်း ရဲ့ တရား ၊ ခဏ..ခဏ..ခဏ မေ့ထား ” ( သီချင်းစာသား မှ )
ဦးထုတ်ဘာလို့ မဆောင်းရတာလဲ။ အခုတလော ခဏခဏ ဆိုင်ကယ်တိုက်သံ မှောက်သံတွေ ကြားနေ၇တယ်။ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်၏တဲ့။ ဦးထုတ်ကိုသာ သတိလေးနဲ့ ဆောင်းခဲ့ရင် အခုလို အဖြစ်ဆိုးချင်မှ ဆိုးမှာ။
အစစ အရာရာ ဆင်ခြင်ကြပါ
ဘယ်လိုဆိုင်ကယ်လဲလဲ ဦးထုပ်ပါတော့ တော်သေးတယ်ဗျ။
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့မန်းလေးက ပိုဆိုးသေးတယ် ဖုန်တွေက မျက်လုံးထဲဝင်သေး
ဦးထုပ်တောင် ရှေ့က အကာပါတာပိုကြိုက်တယ်။
ကျမလည်း အရင်က ဆိုင်ကယ်စီးရင် ဦးထုတ်မဆောင်ပဲ စီးတာများတယ်၊ နောက်တော့ ကျမ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်း ဆိုင်ကယ် ဦးထုတ်မဆောင်းဘူး၊ အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကျမှ အန္တရာယ်ကို နားလည်သွားတော့ ဆိုင်ကယ်စီးတာနဲ့ ဦးထုတ်အမြဲဆောင်းဖြစ်သွားတယ်၊ အခုဆို ဆိုင်ကယ်စီးရင် ဦးထုတ်မပါရင် မစီးတတ်တော့ဘူး……………
သေခြင်းတရားဆိုတာ တခါတခါတော့လည်း ရုတ်တရက်ကြီး ရောက်လာတတ်တဲ့အခါ ကျန်ခဲ့တဲ့သူများအဖို့ မှာတော့…မချိအောင်ခံစားရတတ်ပါတယ်….
ကျနော့ အကိုဝမ်းကွဲတယောက်လည်း ဖျာပုံလမ်းမမှာဆိုင်ကယ်ကြောင့်ပဲ
သေသွားခဲ့ရတယ်ဗျာ။ မှောက်တာက ဖြေးဖြေးလေးကို ဦးထုပ်မဆောင်းမိလို့
အုတ်ဆက် နောက်မှာ ဘုထပြီး ဆေးရုံအရောက်ဆုံးတာပဲဗျာ..
မထင်မှတ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတွေကြောင့် လူ့အသက်တွေပေးကြရတာပဲ.
ဆိုင်ကယ် စီးရင် ဦးထုပ်ဆောင်းဖို့ကတော့ တသက်မမေ့တော့ဘူး….